नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफुहरु सरकार संग वार्ताका लागि तयार रहेको उल्लेख । – Saitim Khabar
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफुहरु सरकार संग वार्ताका लागि तयार रहेको उल्लेख ।
९ मंसिर २०७७, मंगलवार १७:३८
काठमाडौ / सरकारबाट प्रतिबन्धत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफुहरु सरकार संग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका छन् ।
तर वार्ता भने खुलामञ्चमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । महाधिवेशन, पार्टी पुनर्गठन र प्रतिरोध संघर्षका बेला पनि जनताका कुरा राज्यले सुन्यो भने वार्ता हुन्छ भनिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि वार्ता गर्न सकिने बताए ।
‘जनता कहाँ असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा राज्यले सुन्नुपर्यो। हामीले जनताका कुरा उठाएका हौ, के गर्दा जनता खुशी हुन्छन् भन्ने त राज्यले सुन्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘राज्यले जनताका कुरा नसुन्ने अनि हामीलाई वार्ताको पक्षमा छैन भनेर भन्न कसरी मिल्छ ?’
सरकारले प्रतिवन्ध लगाएपछि पनि पार्टीका नेता सुदर्शन लगायतसँग पुगेर राज्यले वार्ता गरौं भनिरहेको उनले बताए । प्रतिवन्ध पछि पनि सुदर्शन लगायत कमरेडहरु सँग पुगेर वार्ता गरौं भनेका छन् । तर वार्तालाई षड्यन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न भएन नि !,’ विप्लवले भने । कसैले देश बाहिर लगेर वार्ता गराउन खोजे त्यो सम्भव नहुने उनको भनाई छ ।
‘राज्य कस्तो देखिन्छ भने सिके राउत जस्तो बनाउने रे ! नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी त्यस्तो हुन्न,’ उनले भने, ‘कसैले दिल्ली लगेर वार्ता गराउन चाहन्छ, तर यस्तो त प्रचण्ड, बाबुराम मात्रै हुन्छ । यो कुरा सबैले बुझे हुन्छ ।’ उनले भनेका छन ।
उनले आफूहरूलाई अहिलेकै सत्तामा घुमाउन राज्यपक्षले चाहेकोले त्यो इच्छा पूरा नहुने पनि बताए । अहिलेको सत्तामा घुमाउन खोज्ने ? त्यो उनीहरूका लागि हुन्छ, हामीहरुलाई हुन्न,’ उनले भने, ‘नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर वार्ता हुने हो ।’
सरकारले वार्ता गर्न खोजे पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले रूची नराखेको भन्ने हल्लामा सत्यता नभएको सोमबार ई–रातोखबरमा अन्तर्वार्ता दिदै विप्लवले भनेका छन् ।